Ku-simaha Madaxweynaha K/Galbeed oo lakulmay wefdi ka socday dowladda Britain | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ku-simaha Madaxweynaha K/Galbeed oo lakulmay wefdi ka socday dowladda Britain
Ku-simaha Madaxweynaha K/Galbeed oo lakulmay wefdi ka socday dowladda Britain
Kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada KMG ah ee Dowlad Goboleedka K/Galbeed ee magaalada Baydhabo ayaa looga hadlaya dowrka Dowladda Britain ay ku leedahay mashaariic horumarineed oo ka soconaya deegaanada maamulkaasi.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka K/Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wefdigaasi oo ka socday Britain islamarkaana ahaa saraakiil sare ayaa kulankoodi ku soo bandhigay waxqabadka dowladda Ingiriiska ee ku aadan dhinacyada dib u dhiska,iyo tababarada ciidamada, xarumaha maamulka uu ka howlgalo.
Wefdigaasi oo ka socoday Britain ayaa sidoo kale sheegey in xukuumadda Britain ay sii wadi doonto taageerada ay lagarab istaagan tahay shacabka iyo Dowlada goboleedka K/Galbeed.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in ay qorsheynayaan sidii ay uga qeyb qaadamn lahaayeen dib u dejin loo sameeyo kumanaanka qof ee ka soo barakacay abaaraha ku dhoftay qeybo kamid ah gobolada dalka kuwaasi oo kujira xeryo kuyaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka K/Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa uga mahad celiyay Dowladda Ingiriiska kaalinta ay ka qaadanayso mashaariic horumarineed oo kaladuwan oo laga hirgeliyay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa.
Previous articleWasaaradda Arrimaha Dastuurka oo kulan wadatashi ah la yeelatay Qurbajoogta dalka ku sugan
Next articleGuddoomiyaasha labada aqal ee Baarlamaanka oo Muqdisho kula kulay saraakiil ka socotay UNDP